Guddoomiye Taabit: Halyeey la Wada Mahadiyey. – Radio Daljir
Diseenbar 29, 2017 1:05 g 0
Marka ruux masuul ah laga hadlayo, oo leh majare siyaasadeed huffan, kala haadsan iyo sooyaal taariikheed togan, way adag tahay in inta miisaanka la saaro si huffan loo dhameystiro, taas oo sababaysa waynida iyo badnaanta taariikhda baaxadda wayn ee la xiriirta noloshiisa howl-karnimo. Waana iyada midda kala hormariso ee kala hal-door badiso siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee xilalka haya ama siyaasadda u dhuun-daloola.
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir, ahna Duqa caasimadda Muqdisho, Mudane Taabit Cabdi Maxamed, waxaa dad badan Soomaaliyeed barteen markii xilka uu hayo loo magacaabay, inkastoo uu la soo shaqeeyey, xilal kala duwana ka soo qabtay Dawladdii uu Madaxweynaha ka ahaa Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa Guddoomiye Taabit loo arkayey nin ka mid ah dhalinyarada firfircoon ee dalka oo hormuud iyo tilmaan u noqon karo dhalinyarada Soomaaliyeed ee doonayo inay kaalin ku yeeshaan siyaasadda iyo dhismaha Dawladnimada. Run ahaantii, magacaabistiisa waxay noqotay tijaabo lagu guuleystay oo ay ka marag kaceen bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan, gaar ahaan dhalinyarada, marka la eego waxqabadka iyo dadaalka shaqo ee uu muujiyey mudadii yarayd ee uu xilka hayey.
Waxaa qoraalkan shaqsiga ah igu dhaliyey markii aan arkay dareenka shacabku ka qabaan mudane Taabit iyo sida dhalinyaradu ugu hanwayn tahay inuu meel wanaagsan u horseedayo dadka ku dhaqan caasimadda Muqdisho iyo Gobolka Banaadir, sida ka muuqdo horumarka iyo dadaaladda kale ee ka socda caasimadda. Waxaa kaloo qoraalka igu dhaliyay waa sida mudane Taabit dusha u saartay masuuliyaddiisa shaqo iyo sida uu uga danqanayo dhibka ay wajahaan dadka Soomaaliyeed iyo deg-degga uu uga jawaabo baahidooda iyo tabashooyinkooda, gaar ahaan dadka ku nool caasimadda Muqdisho. Waxaa kaloo la wada garawsan yahay in mudane Taabit uu u dhega-nugul yahay cabashooyinka ka soo yeera bulshada, wuxuuna marwalbo u taagan yahay tayaynta adeegyada Maamulka Gobolka Banaadir iyo caasimadda in ay noqdaan kuwo loo siman yahay, dadkuna wada gaaro, isagoo ka ilaalinayo in lagu bixinin hayb iyo qof jeclaysi.
Haddaba, arrimaha lagu xusuusto mudane Taabit oo aan marna lagu dafiri karin waa geesinimada iyo dhiirranaanta uu ku dhisay Maamulka Gobolka Benaadir, xilal sare na u magacaabay gabdho Soomaaliyeed oo aqoon iyo karti leh. Sidoo kale, Guddoomiyeyaasha degmooyinka wuxuu ka soo xulay dhammaan beelaha Soomaaliyeed, waana markii ugu horreysay ee loo wada loo siman yahay maamulka caasimadda Muqdisho, tan iyo burburka Dawladdii hore. Arrintaas mudane Taabit wuxuu ku dumiyay derbi laga hadli karin, dad badanna way ku farxeen, waxayna u arkeen tub wanaagsan soo celisay kalsoonidii ay dadka Soomaaliyeed u qabeen in Caasimadda Muqdisho tahay meel loo siman yahay oo aysan jirin cid marti ku ah ama mid dad gaar ah u xiran tahay. Waa masuulkii ugu horreeyey oo si cad u muujiyey sinnaanta iyo wax wada-lahaasnaha dadka Soomaaliyeed oo dhan. Mudane Taabit wuxuu muwaadin walbo ku matalaa si dhab ah ugu yahay Duqa magaalada Muqdisho, caasimadda ummadda Soomaaliyeed.
Iyadoo la wada og yahay in shaqa la’aantu ay ku baahsan tahay geyiga Soomaaliyeed, isla markaana dhalinyaradu yihiin bulshada qaybta ugu badan ee shaqo la’aanta saamaysay, ayaa Guddoomiye Taabit hirgeliyay qorshe sal ballaaran oo shaqo loogu abuurayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda. Qorshahaasi bilowga ah waxaa la shaqaalaysiiyey in ka badan 1500 qof oo isugu jiro wiilal iyo gabdho oo aqoon iyo karti lagu soo xulay.
Qorshaha shaqo abuurka ah waxa uu wax ka tarayaa in rajada u soo laabato dhalinyarada iyo in ay qayb ka noqdaan nabadda maadaama dhalinyarada lug ku leeyihiin falalka amni darrada sababo dhaqaale awgood. Sidoo kale, wuxuu wanaajinayaa nolosha qoysas badan si ay uga baxaan saboolnimada. Mudane Taabit wuxuu mar walbo garab iyo gaashaan ay ku hirtaan u noqday qoysas Soomaaliyeed danyarta ah oo awoodi waayay in ay caruurtooda u helaan caafimaad, waxbarasho iyo nolol.
Xasilinta Caasimadda iyo Kaalinta Guddoomiye Taabit.
Mudane Taabit waxa uu gundhige u ahaa madaxdii dajisay qorshaha xasilinta caasimadda Muqdisho oo ciidamo gaar loo sameeyey, kuwaasi oo yareeyey falalkii amni darrada ahaa ee dhici jiray inkastoo dhibaatadan oo daba dheeratay wali xili kooban lagu soo afjari karin. Waxaase maanta jira ciidan abaabulan oo shaqadoodu tahay inay dhimaan qatarta iyo weliba hubka lagu dhex wato magaalada oo dhibaato badan lagu qabay.
Marka la eego dhacdooyinkii argagaxiso ee ugu danbeeyey ee ka dhacay Caasimadda Muqdisho, Mudane Taabit wuxuu muujiyay dadaal dheeri ah oo laga filanayay, isagoo habeen iyo maalin u soo jeeday sidii uu ula tacaali lahaa dadka ku dhaawacmay qaraxyadii dhacay, gaar ahaan, masiibadii isgoyska Soobbe. Waxaa la arkayey Guddoomiye Taabit oo ilmaynaya iyo isagoo daabulaya dhaawac iyo weliba isagoo horboodayobkacdoonka dhalinyarada ee ka dhan ahaa kooxaha argagaxida ah ee ka danbeeyey falkaasi foosha xumaa.
Runtii marka la eego waxqabadka Guddoomiye Taabit ma aha mid maqaal kooban lagu soo koobi karo, laakiin waxaan iftiimiyay waxa dad badan oo Soomaaliyeed ila qabaan ama ku arkeen oo waxqabad iyo hawlkarnimo ah. Inta badan dadka Soomaaliyeed waxa ay u badan yihiin kuwo wax naqdiya ama sheega ceebo ama dhaliilo. Soomaalidu waxay sidoo kale tiraahdaa,“dhimo ha lagu ammaanee”, laakiin waxaa muhiim ah in qofka laga run sheego waxa uu yahay iyo waxa uu qabtay, isagoo weliba xilka hayo, taasi oo u noqon karta dhiirrigelin. Waxaan qoraalkayga ku soo afmeerayaa in Guddoomiye Taabit yahay halyeey la wada mahadiyey, muddada koobneyd ee xilka uu hayo.
Dowladda Maraykan oo ka hadashay Weraaradii sanadkan dhamaadkiisa Somaaliya ka fuliyeen